MacOS Monterey 4 Developer Beta 12.1 Yakaburitswa | Ndinobva ku mac
MacOS Monterey 4 kuvandudza beta 12.1 yakaburitswa
Iyo itsva macOS Monterey yevagadziri ichangobva kuburitswa neApple. Munyaya iyi ndiyo macOS Monterey 4 beta 12.1 uye inowedzera zvinhu zvitsva mukuchengetedza uye kugadzikana kwakazara kwehurongwa. Iyo nyowani macOS yekuvandudza beta yave kuwanikwa kurodha nekuiswa.
Iyi vhezheni inosvika achangopfuura mavhiki maviri beta 3 yaburitswa. Izvo hazvireve chero chinhu asi ichokwadi kuti kana nguva dziri pakati pekutangwa dzichiramba dzichiwedzera uye nhamba yebeta vhezheni ichiramba ichiwedzera senge munguva pfupi yapfuura, iyo yepamutemo vhezheni haisviki kusvika gore rinouya.
Parizvino, nguva dziri pakati peshanduro dzebeta dzakati rebei sezvatinotaura, kunyangwe chiri chokwadi kuti tiri kufamba zvakanaka kuti tive neshanduro yekupedzisira gore rino risati rapera, zvese zvinoenderana nenhamba yebeta shanduro dzavanoda. kutanga kare. Ngazvive izvo, isu tinofungidzira kuti ivo vachada kusiya zvese muhurongwa hwekushanda hwakakwana, saka hatitarisire shanduko dzakawandisa kune inoshanda sisitimu izvo zvinogona kukanganisa kuchengetedzeka kwayo kana kugadzikana.
Muiyi vhezheni itsva hapana shanduko inowedzerwa kupfuura kugadzirisa kwebug kwatinoziva nezvayo, kana paine nhau mune ino beta 4 vhezheni tichaiburitsa pawebhu. Senguva dzose, isu tinokurudzira kugara kure neiyo beta vhezheni yeMacOS yevagadziri uye kumirira zvakanyanya kune yeruzhinji beta vhezheni iyo ichave iripo munguva pfupi. Anyway the best in all cases or zviri nani kusaisa idzi beta vhezheni kudzivirira matambudziko anogona kuitika kana kusawirirana nechero App kana chishandiso chatinoda muzuva redu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Mac Os X » macOS Monterey » MacOS Monterey 4 kuvandudza beta 12.1 yakaburitswa
Alphabet CEO Anofarira Ted Lasso Kupfuura Squid Game
Firimu reCODA rinoramba richigamuchira mibairo yeApple TV +